Tape dhimatay, Awdida Tape, saar Khatimidii, Ptfe dhimatay Tape, Ptfe dhimatay - Friendship daa'imka
soo dejiso cajalad ptfe in Hindiya
cajalad dhimatay kaamil ah
waxyaabaha baahida weyn ee Hindiya
Iyada oo ku saleysan sheyga, suuqa PTFE Maro adag ayaa segmented galay dhar, cajalado, suumanka, xadhko, threads, oo daah. Threads ee Maro adag PTF ka dhigay shaqeeya si loo hagaajiyo sewability iyo in la yareeyo khilaaf. Waxay u yahay ...
Rolls 100% cajalad saafi PTFE non-sintered dhigi seal kaamil ah muddo dheer oo ku saabsan wax kasta oo dhexroor iyo nooca dunta. cajalad ma ha adkaynina iyo ka hortagtaa qabashada ee ururada shaqaalaha iyo handarraabbadeedii. duub Professional ayaa sidoo kale availab ...